Unicode version ကျွန်တော်တို့သည် အံ့သြပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော workshops များ on
Pages Australia Society EDULINK
We are your local partner in building an international future.
- English language training online or in-class for individuals and organizations.
- Study Abroad Services linking you to top institutions around the world
- Register for IELTS
ကျွန်တော်တို့သည် အံ့သြပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော workshops များ online ပေါ်တွင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန် နည်းလမ်းများရှာဖွေလျက်ရှိသည်။ မတ်လ၊ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော Write Your Song Workshop မှ ဓါတ်ပုံများတင်ပြလိုက်ပါသည်။ ဗီဒီယိုလည်း မကြာမီတင်ပေးပါမည်။
ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ အံ့ၾသေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ workshops မ်ား online ေပၚတြင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။ မတ္လ၊ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၂၀ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Write Your Song Workshop မွ ဓါတ္ပံုမ်ားတင္ျပလိုက္ပါသည္။ ဗီဒီယိုလည္း မၾကာမီတင္ေပးပါမည္။
We are looking at ways of bringing exciting workshops like the one we held on the 14th of March to you in your homes online. The one last Saturday was great fun "Write your song" taught the basics of lyrics writing.
EDULINK님이 게시한 사진